माछाको वासस्थान स‌ङकटमा « goodearthnepal.com
« राजधानीमा हैजा हैजाको पुष्टि »	माछाको वासस्थान स‌ङकटमा	Posted by Bikalpa Adhikari, on July 23, 2012	फोटो भोजपुरको एक खोलामा करेन्ट प्रयोग गरेर माछा मार्दै ।साहित्यकार रमेस विकल आफ्नो किताव अविरल वग्दछ ईन्द«ावतिमा लेख्छन “अघिल्ला पुस्ताका बुढापाकाको मुखबाट सुनिन्छ, यही इन्द«ावतिका पोल्टामा मान्छे जत्रा अर्थात पाँच–सात धार्नी, दश–पन्ध्र धार्नी सम्मका पनि माछा यि माझीहरुको जालमा पर्थे” । हामीलाइ यि कुराहरु हाल कथा जस्तो लाग्ने गर्दछ । तर हाम्रै गाउँ छर–छिमेका अघिल्लो पुस्ताले यो कुरा देखेर भोगेर आएका छन् । सुनिन्थ्यो एक दुइ दशक पहिले गोठालाहरुले लस्करै हुलका हुल गाईवस्तु खोला तार्दा चौपायाहरुको खुट्टाले कुल्चिएर, च्यापीएर मरेका माछा टिप्दै जाँदा एक–दुई धार्नी पुग्दथ्यो रे ! बुढापाकाहरु यसै भन्ने गर्दछन् । साच्चै नेपाल दुर्लभ वनयजन्तु, चराचरुङगी, वनस्पति र माछा जस्ता प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको हिसाबले धनि राष्ट्रमा पर्दछ । तराईका सम्म ठाँउदेखि मध्य पहाड हुदै हिमालको ४००० मीटर उचाइ सम्म १८६ भन्दा बढि प्रजातिका माछा पाइन्छन् । सहर, कत्ले, असला, तिते, गर्दी, बुहारी, रहु, नैनी लगाएतका माछा नेपालका स्थानीय माछा हुन । उपयुक्त अक्सिजनको मात्रा रहेको स्वच्छ पानी, पानीको पारदर्शिपना, प्रसस्त खाना पाइनुले माछाको लागि नेपाल उचीत वासस्थान रहेको बताइन्छ ।
परम्परागत रुपमा माझी कुमाल र अन्य जातिले खोलामा ढडिया थाप्ने, बल्छि हान्ने, दुवाली छेक्ने जस्ता तरिकाबाट माछा मार्ने काम गर्दै आएका थिए । यि तरिका अब गितकारका गित “माछी मारौ दुवाली छेकेर”मा मात्र सिमित होला भन्ने चिन्ता छ । किनकी माछा मार्नलाई बम हान्नु, विष राख्नु, करेन्ट लगाउनुमा मान्छेहरु अभ्यस्त भइसके । यस्ता अबैज्ञानिक तरिकाले हिजो आज खोलामा माछाको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको देखाएको छ । यि तरिकाबाट छिट्टै धेरै माछा मार्न सकिने भएपनि ठूलो नोक्सानी गर्ने भने अस्वम्भावी छ ।
देशभरि नै जनघनत्व बढ्दै गयो । खोला, नदी, दह जस्ता सार्वजनिक र प्राकृतिक स्रोतमा मानिसको दोहन बढ्न थाल्यो । “खोला नाला सार्वजानिक सम्पत्ति हुन् । मैले उपयोग गरिन भने अर्कोले उपभोग गर्छ, म एक जनाले मात्र गरेर सकिने होइन क्यारे” भन्ने ‘कमन प्रोपर्टी रिसोर्स’ तर्फको वातावरणीय अवधारणा मानिसहरुमा लागु भयो । त्यस मानसिकताले खोलाको दोहन थप बढायो । माछा पाइने मुख्य स्थान, दह, रहहरुमा परम्परागत तरिका भन्दा भिन्न बम हानेर, विष राखेर, करेन्ट लगाएर माछा मारिने क्रम तिब्र गतिमा सुरु भयो । विष, बम, करेन्ट, लगाउँदा सबै खाले माछा मर्ने र माछाको संख्या जलासयमा घट्न जाँदा विगतमा पाइने गरेका माछाहरु नपाइने स्थिती वन्दै गयो । थप सन्तान जन्माउने र निरन्तरता दिने कार्यमा कमि भयो । माछाहरु वयस्क नहुदै मारिए । बम, विष, करेन्ट प्रयोगले माछा मात्रै मरेनन् । भ्यागुता, गंगटा, माछाले खाने सुक्ष्म जिव र अन्य जलचर प्राणी सवै एकै पटक मर्न थाले । कुरा अझ गम्भिर के छ भने यसरी जलचरको अनुकुल वातावरण प्रतिकुल हुदै जाँदा पर्यावरण प्रणालीमा असन्तुलन आयो । जलिय पर्यावरणमा ठूलो क्षति र नोकसानी पुग्न गयो । जलिय वातावरणमा यस्तो असन्तुलन हुदा खाध्यचत्रमा समेत प्रतिकुल असर परिरहेको यथार्थ सबैको सामु छ ।
खोलामा माछा घट्नुको अन्य कारण पनि छन् । खोलाबाट अनियन्त्रित रुपमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी झिक्नाले माछा वस्ने कुर, रह, ठूला ढुङ्गाको चेपहरु वाँकी नरहने अवस्था बन्दै गयो । माछाको वासस्थान भताभुङ्ग हुदै गयो । प्राकृतिक वासस्थानमा रमाउने माछाहरु खोलामा हिडडुल गर्ने मोटर गाडीको आवाज, खोलामा मानिसको दैनिकीको चापले माछाको प्राकृतिक वातावरणमा खैलावैला हुनगई सङ्ख्या निरन्तर घट्दो छ । तापक्रम पनि माछाको लागि ज्यादै सम्वेदनशिल पक्ष हो । छिटो छिटो मौसमको फेरबदले हुने असन्तुलित तापक्रम र विश्वब्यापी उष्णता(ग्लोवल वार्मिङ)को कारणले पनि माछालाई असर परिराखेको छ । वनकटानी र भुक्षयको कारण खोलामा माटो थिग्रने प्रकृयाले पनि माछाको वासस्थानमा नकारात्मक भुमीका खेलेको छ । यसले भुरा उत्पादनको लागि पनि असहजता थपिदिएको छ ।
माछा घुमन्ते प्राणी पनि भएकोले जलविद्युतगृहका र नहरका ड्यामले माछाको आवत जावतलाई पनि अवरोध पु¥याउँछ । बिगत दुई दशक देखी नेपालमा वनाएका ड्यामहरु माछा मैत्री छैनन् । नेपालमा पाइने ‘एङगुला बङ्गालेन्सिस’ जातको माछा वर्षेनी समुन्द«मा संभोगका लागि जाने–आउने गर्नु पर्ने हुन्छ । जलविद्युत गृहको ‘ड्याम’मा माछा आवत जावतका लागि आवस्यक पर्ने ‘फिस ल्याडर’ प्रभावकारी नहुँदा माछाको प्राकृतिक वसाँईसराइँमा अवरोध पुगेको छ । कति नदीहरुमा बाँध भन्दा माथीका भागमा माछा पाइन छाडेका छन् । त्यसैले नेपालमा संरक्षणका कार्यहरु खासगरी विशेष महत्व वोकेका लोपउन्मुख प्रजाति वस्ने नदी, खोला र पोखरीमा गरिनु पर्दछ । नेपालमा हाल सार्वजनिक जलक्षेत्रमा माछा मार्नको निम्ति नियमको अभाव छ । भएको जलचर संरक्षण ऐन २०१७ संसोधन सहितलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । नियमको अभावमा व्यवस्थापन र संरक्षणको कार्य अगाडी वढाउन पनि गाह्रो हुन्छ । निश्चित साइज भन्दा सानो माछा मार्न नपाइने, बम विस्फोट गराई, करेन्ट लगाई, विष प्रयोग गरि माछा मार्नेलाई रु २००० देखि ५००० हजार सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था जलचर संरक्षण ऐनमा गरिएको छ । अबैद तरिकाबाट माछा मार्नेलाई स्थानीय प्रसासनले दण्ड जरिवाना गर्न सक्दछ । यदि जैविक विविधताको संरक्षण कायमै राख्ने हो भने अब सार्वजनिक नदी र पोखरीमा गम्भिर चासो राखिनु पर्ने भएको छ । चरणबद्ध रुपमा माछाको मौजात, प्रजाती, संख्या र वासस्तान वारेको अनुसन्धान जारी राख्दै वासस्थानको सुद्रिढिकरणमा उचित ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । जलविद्युत ड्याम तलको भागमा नियमानुसार पानी छोड्नु पर्ने, अप्राकृतिक तरिकाले माछा मार्ने चलनलाई हतोत्साइत गर्ने जस्ता कार्यक्रमले पक्कै पनि संकटमा परेको माछाको वासस्थानलाई वचाउन सहयोग हुनेछ । यस प्रकृयालाई अगाडी वढाउदा गरीब र भुमि बिहिन नेपालका माझी, कुमाल, वोटेहरु जस्ता माछा मारी जिविकोपार्जन गर्नेहरुलाई साथै लैजानु पनि अनिवार्य हुन्छ ।
July 23rd, 2012 | Leaveacomment LeaveaReply Cancel reply
Jobs and Opportunity (1)
Nepali Contents (1)
माछाको वासस्थान स‌ङकटमा
हैजा भेटियो: ताहाचल, कालिमाटी र टेकु क्षेत्रमा संक्रमण
Air and water pollution do not recognize borders. So, think globally.
Copyright © 2014 goodearthnepal.com - All Rights ReservedPowered by WordPress & Atahualpa